Nabadoon Axmed Diiriye Cali Oo Ku Geeriyooday Magaalada Muqdisho [Warbixin].
Tuesday February 20, 2018 - 07:52:11 in Wararka by Super Admin
Sida ay sheegeen Ehelladiisa waxaa xalay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ku dhintay Axmed Diiriye Cali oo kamid ahaa odayaasha dhaqanka kuwooda ugu caansan Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Xanuun daran oo uu ka sheeganayay ayaa ugu dambeyn xalay legday, Axmed Diire Cali ayaa soo caanbaxay sanaddii 2007 xilligaas oo ciidamada Xabashida Itoobiya iyo maleeshiyaadkii Col.Cabdullaahi Yuusuf ay qabsadeen magaalada Muqdisho iyo inta badan gobollada dhaca Koonfurta Soomaaliya.
Wuxuu kamid noqday Odayaashii dhaqanka Beelaha Hawiye ee dagaalka dhanka afka ah lagalay ciidamadii Itoobiya illaa sanaddii 2008 ciidamada Itoobiya ay Muqdisho ku xireen markii dambana ay ugudbiyeen magaalada Baydhabo.
Mawaaqifta Axmed Diiriya ayaa isbedeshay sanaddii 2009 xilligaas oo uu taageeray dowladdii Shariif Sheekh Axmed iyo ciidamada shisheeye ee Soomaaliya kusoo duulay wixii xilligaas ka dambeeyay ayuu Axmed Diiriye kamid ahaa tiirarka waaweyn ee dowladda Federaalka ay ku taagneed isagoo si aad udifaaci jiray wuxuuna cambaareymo isdaba joog ah hawada umarin jiray Xarakada Al Shabaab.
Sanaddii 2012 ayuu Nabadoon Axmed Diiriye ka qeyb galay shirqoolkii Odayaal shaqameedyo katirsan Beesha Habar Gidir ay cadowga ugu gacan geliyeen Sheekh Xasan Daahir Aweys oo kamid ahaa culimada ugu caansan dalkan Soomaaliya, sanadadii dambe ayuu Axmed Diiriye ku shaqeynayay magaca Afhayeenka odayaasha dhaqanka Beelaha Hawiye ee ku safka ah dowladda Federaalka iyo xulufadeeda shisheeye.
Mid kamida wiilasha Nabadoonka Dhintay ayaa xilal kala duwan kasoo qabtay dowladda Federaalka gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir wuxuuna Odaygu kamid ahaa budhigayaasha xukuumadihii soo maray dowladda Federaalka wixii ka dambeeyay sanaddii 2009.
Waxaa lafilayaa in aaskiisa ay kasoo qeyb galaan Mas'uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Federaalka waloow Farmaajo iyo Kheyre aysan bilihii dambe isku wanaagsaneyn siyaasiyiintii ku xeyndaabnaa Axmed Diiriye Cali.
Geeridu waa xaq qof walbana waa dhiman haddii uu ahaan lahaa mid caan ah iyo mid aan caan aheyn intaba, allaha unaxariisto dhammaan muslimiinta.